China Zvishongo zvedenga laser nzvimbo yekutengesa muchina Mugadziri uye mutengesi | Suntop
Zvishongo nezvishongo zvemagetsi nzvimbo
Zvishongo nezvishongo zvemuchina wekucheka muchina sumo:
Muchina uyu unogadzirirwa zvishongo uye zvimwe zvidiki simbi zvigadzirwa girazi laser welding, inonyanya kushandiswa munzvimbo yekumonera simbi dzakasiyana siyana.
Laser gwapa nomoto chinhu chakakomba Laser zvinhu kugadzira michina, mumwe gwapa-nomoto muitiro iri chafariz conduction, kureva Laser nemwaranzi kudziyisa pamusoro, pamusoro kupisa kuti womukati diffusion kuburikidza kupisa conduction, nokudzora upamhi Laser kupomba, simba, simba repamusoro uye nekudzokorora frequency, parameter senge kusungunuka kwezvinhu, kugadzira dziva rakaumbwa.
Nekuda kwekukosha kwayo kwakasarudzika, yakashandiswa zvinobudirira mugoridhe nesirivha kugadzirwa kwekushongedza uye nomoto wezvikamu zvidiki uye zvidiki.
Iyo inoshanda musimboti yeiyo laser deposition yekutengesa sisitimu ndiyo yekutengesa tekinoroji ine yakanyanya kupisa simba uye yepakati nzvimbo, iyo inogona kunyatsogadzirisa nekumwaya uye kugadzirisa kwezvose zvidiki zvidimbu, uye kutsiva yekushomeka kwechinyakare argon arc yekutengesa tekinoroji mukugadzirisa uye Welding wakanaka pamusoro.
Izvo zviviri zvikumbaridzo zvekupisa zvinodziya uye post-kurapwa zvinodzivirirwa, izvo zvinoponesa zvakanyanya kugadzirwa kwekutenderera kweforoma.
Laser nzvimbo welder inonyanya kushandiswa kugomba kuzadza uye kuona nzvimbo yegoridhe nesirivha zvishongo, uye inogona zvakare kushandiswa kutonhorera kutonhora kweakakwira chiwanikwa simbi, inopisa yekuchengetedza yakakwira chiwanikwa simbi, nickel chishandiso simbi, yakakwira giredhi simbi, mhangura chiwanikwa, beryllium mhangura , yakasimba kuomarara aluminium alloy, goridhe, sirivheri uye zvimwe zvinhu zvesimbi.
SUNTOP Zvishongo nezvishongo zvemuchina wemuchina iwo makuru maficha:
Mushini wese unogona kuiswa desktop, yakavakirwa-mumvura-kutonhora dhizaini, diki nzvimbo.
Simba, kupamha kwehupamhi, kuwanda, saizi yemahara inogona kugadziridzwa mune yakakura renji, kuti uwane zvakasiyana siyana zvekumonera mhedzisiro.
Iyo parameter inogadziriswa neiyo tambo yekudzora mune yakavharwa mhango, iri nyore uye inoshanda.
Iko kushandiswa kweBritain kwakapinzwa keramic kondensheni mhango, kurwisa ngura, kwakanyanya kupisa tembiricha, yakakwira fotoelectric kutendeuka kushanda, kudzikamisa hupenyu hwemukati (makore gumi nemasere), xenon mwenje hupenyu kanopfuura mamirioni masere.
Iyo hood inoenderana, bvisa kukurudzira kumeso munguva yekushanda.
Nemaawa makumi maviri nemana anoramba achishanda kugona, iwo muchina wese mashandiro akatsiga.
Dhizaini yemunhu, ergonomic, maawa ekushanda marefu pasina kuneta.
Zvakanakira zvakanyanya: kumhanya nekukurumidza, kushanda kwakanyanya, kudzika kwakakura, kushomeka kudiki, diki kupisa nharaunda inokanganisika, yepamusoro yekutenderera mhando, hapana kusvibiswa, kugona kwakanyanya uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza.
Iwo makuru ma parameter echishongo girazi laser yekutengesa muchina:
Max. Laser simba 150W
Yese simba rekushandisa 5KW
Laser yekutarisa 110mm
Laser kupomba inodzokororwa frequency ≤0.1-20Hz
Mvura TM Kudzivirirwa 10-30 dhigirii
Laser kupomba upamhi ≤ makumi maviri
Laser yekudzivirira gasi 1 nzira
Magetsi 220V / 50Hz / 20a
Divi 900 * 500 * 600mm
Net huremu hwemuchina 80KG
Iwo chaiwo jewelry laser welding sampu mapikicha ekureva:
Pashure: Ruoko rwakabata fiber laser yekutengesa muchina
Zvadaro: CO2 Laser nokuveza uye achiita zvokutemera muchina
Pipe Fibre Laser Yakacheka, Fiber Laser Kucheka Machine, Tube Laser Kucheka, Fiber Laser Kucheka Muchina, China Fiber Laser Kutema Muchina, Fiber Laser Pipe Kutema Muchina,